Ny fivavahana ao/eto Madagasikara dia mitovitovy amin'ny an'ireo firenena ao Afrika ahitana ny fifanojoan'ny fivavahana maro samihafa izay miteraka fanao ara-pivavahana isan-karazany. Ny tena be mpanaraka dia ny fivavahan-drazana sy ny fivavahana kristiana ary ny finoana silamo. Hita koa ny fivavahana hafa toy ny bahaisma sy ny hindoisma. Efa eto Madagasikara koa izao ny jodaisma.
1.1 Ny fivavahana amin'ny Razana
1.2 Fivavahana amin'i Zanahary
4 Hindoisma eto Madagasikara
5 Bahaisma eto Madagasikara
6 Jodaisma eto Madagasikara
7 Fampifangaroana finoana
8.1 Finoana sy fomba malagasy:
8.2 Fivavahana eto Madagasikara:
9 Azo anovozan-kevitra:
9.2 Fivavahana jiosy
Ny fivavahana amin'ny RazanaHanova
Mihoatra ny 52%n'ny mponina no manaraka ny fivavahan-drazana izay fivavahana manantitra ny fifandraisan'ny velona sy ny maty (Razana). Tsy misaraka amin'ny tontolon'ny velona ny tontolon'ny Razana izay ivavahana ka izany no ahitana Malagasy manao fomba isan-karazany amin'ny fanamboaram-pasana sy amin'ny fanatanterahana ny famadihana amonosan-damba indray ny maty sy andevenana azy indray aorian'izay. Any Imerina sy any Ibetsileo no tena ahitana ny fanaovana famadihana. Izany fivavahana amin'ny razana izany dia matetika miaraka amin'ny fanandroana sy ny sikidy.
Fivavahana amin'i ZanaharyHanova
Ny Kristianisma eto MadagasikaraHanova
Ny 41%n'ny Malagasy dia Kristiana ka ny tena misongadina, raha amin'ny lafiny isa, dia ny Katolika sy ny Protestanta.
Tamin'ny nahatongavan'ny misionera protestanta anglisy, dia i David Jones sy i Thomas Bevan, izay nirahin'ny London Missionary Society (LMS) tamin'ny taona 1820, no nanombohan'ny fitoriana ny Filazantsara teto Madagasikara. Nanaraka izany teo antenantenan'ny taonjato faha-19 ireo misionera norveziana sy misionera katolika izay nanorina fiangonana sy sekoly.
Mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena ny fiangonana kristiana malagasy ka ny fantatra indrindra amin'izany dia ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) ahitana ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) sy ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) sy ny Eglizy Katolika Apostolika Romanina (EKAR) ary ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) izay mandray anjara amin'ny famahana ny olana politika eo amin'ny firenena malagasy. Hita ao koa ny Fiangonana ortodoksa izay misy mpino eo amin'ny 20.000 eo sady miaraka amin'ny Patriarkatan'i Aleksandria , ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany (misy mpino miisa 8000 eo ho eo), ny Vavolombelon'i Jehovah, ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito sy ny hafa koa.
Efa tany amin'ny Andro Antenantenany no nisy Arabo sy mpivarotra somaliana miozolmana nanorina sekoly silamo tamin'ny morontsiraka atsinananan'i Madagasikara. Ny fanandroana arabo no niely manerana ny Nosy fa ny fivavahana silamo kosa dia tsy tafapetraka afa-tsy tamin'ny toerana vitsy dia vitsy tany atsimo-atsinanan'i Madagasikara.
Amin'izao fotoana izao dia ny 1%n'ny mponin'i Madagasikara dia Miozolmana ka Komoriana sy Karàna (Indiana sy Pakistaney) ny ankamaroany dia any amin'ny tapany avaratra-andrefan'ny Faritanin'i Mahajanga sy any amin'ny Faritanin'Antsiranana. I Mohammed V, mpanjakan'i Marôka, izay nialokaloka teto Madagasikara, no nahataona Malagasy sasany ho lasa Silamo.
Nanomboka tamin'ny taona 2010 dia nihanitombo ny integrisma miozolmana izay vatsian'ny firenena any amin'ny Helodrano Persika sy avy any Pakistàna vola. Manahy noho izany ireo Miozolmana mpanaraka ny Finoana silamo tranainy sy ny mpandraharaha silamo. Tsara ho marihina koa fa mitombo tanjaka ny salafisma ao amin'ny Tangoronosin'i Komoro
Efa miorina eto Madagasikara koa ny fivavahana jiosy na jodaisma izay miseho amin'ny endriny maro. Mitombo isa noho izany ny Jiosy malagasy ara-pivavahana.
Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ireo Malagasy izay mampirafy finoana ka mampifangaro ny fivavahana kristiana na silamo na hafa amin'ny fivavahan-drazana. Ohatra raha misy maty dia entina any am-piangonana ny razana avy eo rehefa any am-pasana dia atao ny fandevenana manaraka fomban-drazana na antsoina ny mpitondra fiangonana hanome endrika kristiana ny famadihana .
Finoana sy fomba malagasy:Hanova
Fivavahana eto Madagasikara:Hanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_eto_Madagasikara&oldid=992281"
Dernière modification le 11 Mey 2020, à 11:38
Voaova farany tamin'ny 11 Mey 2020 amin'ny 11:38 ity pejy ity.